High end Wine Cooler - Foshan Blueway လျှပ်စစ်ပစ္စည်းကိရိယာများ, Ltd.
Water Heat Pump သို့လေ
အပူ Pump ရေအပူပေးစက်
ကြမ်းပြင် - ရပ်တည် AC
Modular Air- အအေး Scroll Chiller
ကြမ်းပြင် - မျက်နှာကျက် AC
ပြွန် - မျက်နှာကျက် AC
ကက်ဆက် AC အ
Blueway Company also can provide high-end various kinds of wine coolers, which have been exporting to oveaseas for so many years. Blueway Wine Coolers have standard and customized types, classic and fashionable type.
အဆင့်မြင့်နည်းပညာနှင့် R ကိုအတူ&capacity စွမ်းရည်, Blueway has obtained over more than 20 patents and become one of the leading HVAC manufacturers in China. Meanwhile, 70% Blueway ထုတ်ကုန်များပြည်ပဈေးကွက်သို့တင်ပို့ရောင်းချ, သြစတြေးလျအပါအဝငျ, ဥရောပ, မြောက်အမေရိက, အရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသ, တောင်အာဖရိက, South America and obtained worldwide recognition. ထို့အပြင်, it has over 20 တရုတ်ပြည်မတူညီသောမြို့ကြီးများတွင်ကိုယ်စားပြုရုံးများရှိသည်, ထို့အပြင်ဥရောပ၌၎င်း၏ခွင့်ပြုချက်ဖြန့်ဖြူးရှိပါတယ်, အရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသ, မြောက်အမေရိကနှင့်တောင်အမေရိက.
သ, Blueway ပြီးပြီ 10000 ကြီးမားသောအောင်မြင်မှုနှင့်အတူအင်ဂျင်နီယာဖြေရှင်းချက်. What's more, Blueway သည်တရုတ်စျေးကွက်ရှိ Hilton Hotel မှထောက်ခံသည့်အမှတ်တံဆိပ်လည်းဖြစ်သည်. Blueway သည်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိမိတ်ဖက်များအားအမြင့်မားဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်ရှိသောဖြေရှင်းနည်းများနှင့်ဆန်းသစ်သောထုတ်ကုန်များကိုထောက်ပံ့ပေးခြင်းအားဖြင့်၎င်း၏ကြိုးပမ်းမှုများနှင့်ကတိက ၀ တ်များကိုဆက်လက်လုပ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်သည်. မေး: What’s the highlight of the product?
က: Adopt air-cooled cycle design, which ensures the indoor temperature more equably.
မေး: Cabinet options?
က: Black leather lines, brown wood grains, red wood grains, stainless steel & solid wood.
မေး: Any special of the door?
က: Fashionable dual-layer toughened glass can keep moisture effect, even can avoid the strong light damage toward the red wine.
မေး: With door lock?
က: Yes, the wine cooler with special door lock structure.
မေး: Wine cooler can be customized?
က: Yes, for example, we can make it with cup hanging racks. Door can be designed to open by left or right side.
မေး: What’s the payment term?
က: ယေဘူယျအားဖြင့်, T/T via bank.
မေး: What’s your production capacity of this product?
က: 1000 sets, but it mainly depends on the PMC and production plan.
Specifications Of Blueway Cooler 2021.pdf
Foshan Blueway လျှပ်စစ်ပစ္စည်းကိရိယာများ, Ltd.
ထည့်ပါ： နံပါတ် ၆, Zhanye လမ်း, Honggang စက်မှုဇုန်, Daliang, Shunde, ဖိုရှန်, ဂွမ်ဒေါင်း, တရုတ်.
Foshan Blueway လျှပ်စစ်ပစ္စည်းကိရိယာများ, Ltd. © 2020 မူပိုင်ခွင့်များရယူပြီး သင်္ဘောပေါ်လစီပြန်လည်ပေးပို့ခြင်းဆိုင်ရာမူဝါဒကိုယ်ရေးအချက်အလက်မူဝါဒ